136s Kuzivikanwa kwaAndrew Cuomo kusinga fungidzike pakati pehosha ye coronavirus images and subtitles
-New York gavhuna Andrew Cuomo abuda semumwe wepamusoro-wepamusoro wezvematongerwo enyika mukati mekuputika kwe coronavirus. -Tichine trajectory yekukwira. -The dambudziko rakakurumidza kupararira muUnited States rakachinja zuva nezuva hupenyu hwevanhu vekuAmerica. Pamusoro pemamiriro ezvinhu anototya uye anovhiringidza chikamu chakawedzerwa chemashoko ezvematongerwo enyika akasangana. -Unotarisa tsaona dzemotokari, ayo akanyanya kuresa kupfuura chero manhamba atiri kutaura nezvawo. Izvi hazvireve kuti tinoudza munhu wese, "Hapasina kutyaira kwemotokari." -Asi Cuomo akaedza kuendesa kujekeswa muzvidimbu zvake zvezuva nezuva. New York yakawedzerawo nyaya dze coronavirus kupfuura chero imwe nyika. Dzidziso dzaCuomo dzinotsanangudza zvakajeka zvido zvehurumende yake. -Ventilators, ventilators, ventilators. Tinoda makumi matatu. -Kana gavhuna zvakare anoedza kudzikamisa kutya kusimuka. -Ndinogona kuona kuti vanhu veNew York vapindura sei. Ndiri kuona maNew Yorkers ari kubatirana. Ndiri kuona ivo zviuru mazana matanhatu ezvehutano hwepfungwa vanozvipira. Ndiri kuona vashandi vehutano makumi mana vaisvika mudanho. Ndiri kuona vatengesi vachindishevedza vachiti, "Ndinogona kubatsira." Ndiyo New York. Ndiyo New York. -Naizvozvo, zvipfupi zvave zvekutariswa kwekutarisa zveNew Yorkers uye kupfuura. Cuomo anga akave pachena nemifungo yake pamusoro pehutongi hwaTrump. Pakutanga kwenhamo, Cuomo naTrump vakatanga nekufara nekuisa parutivi mutsauko. -Asi mutungamiri uye ini tabvuma zuro, tarisa, tiri kurwa hondo imwe chete, uye ino ihondo. -Asi sezvo mamiriro ezvinhu akaramba achiwedzera, kwavo kumashure-uye-uko akatsamwa. -Iwe unoda patsi kumusana kwekutumira mazana mana emhepo? Chii chatiri kuita ne400 maililators apo isu tinoda 30,000 ventilators. -Asi, iwe unoziva, kana iwe uchifunga nezveGavhuna Cuomo, tiri kumuvakira zvipatara zvina. Tiri kumuvakira nzvimbo ina dzekurapa. Tiri kushanda zvakanyanya, zvakaoma zvikuru kune vanhu veNew York. Tiri kushanda pamwe naye, ndobva ndamutarisa pa show achinyunyuta. -Regardless kana VaTrump vachiuya panguva yekutaura kwaCuomo kana kwete, izvi zvezuva nezuva nemubati zvave chakafanana kweNew Yorkers vachitsvaga kutungamirirwa uye kunyaradza. -Tiri kuzogadzira nekuti ndinoda New York, uye ndinoda New York nekuti New York inokuda.
Kuzivikanwa kwaAndrew Cuomo kusinga fungidzike pakati pehosha ye coronavirus
< start="0.12" dur="1.92"> -New York gavhuna Andrew Cuomo abuda >
< start="2.04" dur="2.2"> semumwe wepamusoro-wepamusoro wezvematongerwo enyika >
< start="4.24" dur="1.79"> mukati mekuputika kwe coronavirus. >
< start="6.03" dur="2.4"> -Tichine trajectory yekukwira. >
< start="8.43" dur="2.14"> -The dambudziko rakakurumidza kupararira muUnited States >
< start="10.57" dur="2.07"> rakachinja zuva nezuva hupenyu hwevanhu vekuAmerica. >
< start="12.64" dur="3.03"> Pamusoro pemamiriro ezvinhu anototya uye anovhiringidza >
< start="15.67" dur="2.43"> chikamu chakawedzerwa chemashoko ezvematongerwo enyika akasangana. >
< start="18.1" dur="2.7"> -Unotarisa tsaona dzemotokari, >
< start="20.8" dur="2.97"> ayo akanyanya kuresa kupfuura chero manhamba atiri kutaura nezvawo. >
< start="23.77" dur="2.26"> Izvi hazvireve kuti tinoudza munhu wese, >
< start="26.03" dur="1.35"> "Hapasina kutyaira kwemotokari." >
< start="27.38" dur="2.14"> -Asi Cuomo akaedza kuendesa kujekeswa >
< start="29.52" dur="1.31"> muzvidimbu zvake zvezuva nezuva. >
< start="30.83" dur="2.58"> New York yakawedzerawo nyaya dze coronavirus >
< start="33.41" dur="1.43"> kupfuura chero imwe nyika. >
< start="34.84" dur="3.09"> Dzidziso dzaCuomo dzinotsanangudza zvakajeka zvido zvehurumende yake. >
< start="41.52" dur="1.38"> Tinoda makumi matatu. >
< start="42.9" dur="1.9"> -Kana gavhuna zvakare anoedza >
< start="44.8" dur="1.35"> kudzikamisa kutya kusimuka. >
< start="46.15" dur="3.22"> -Ndinogona kuona kuti vanhu veNew York vapindura sei. >
< start="49.37" dur="3.37"> Ndiri kuona maNew Yorkers ari kubatirana. >
< start="52.74" dur="2.67"> Ndiri kuona ivo zviuru mazana matanhatu ezvehutano hwepfungwa vanozvipira. >
< start="55.41" dur="4.1"> Ndiri kuona vashandi vehutano makumi mana vaisvika mudanho. >
< start="59.51" dur="3.48"> Ndiri kuona vatengesi vachindishevedza vachiti, "Ndinogona kubatsira." >
< start="62.99" dur="2.83"> Ndiyo New York. Ndiyo New York. >
< start="65.82" dur="2.45"> -Naizvozvo, zvipfupi zvave zvekutariswa kwekutarisa >
< start="68.27" dur="1.48"> zveNew Yorkers uye kupfuura. >
< start="69.75" dur="1.81"> Cuomo anga akave pachena >
< start="71.56" dur="1.77"> nemifungo yake pamusoro pehutongi hwaTrump. >
< start="73.33" dur="2.54"> Pakutanga kwenhamo, Cuomo naTrump vakatanga >
< start="75.87" dur="2.22"> nekufara nekuisa parutivi mutsauko. >
< start="78.09" dur="2.36"> -Asi mutungamiri uye ini tabvuma zuro, tarisa, >
< start="80.45" dur="3.83"> tiri kurwa hondo imwe chete, uye ino ihondo. >
< start="84.28" dur="2.48"> -Asi sezvo mamiriro ezvinhu akaramba achiwedzera, kwavo kumashure-uye-uko >
< start="86.76" dur="1.57"> akatsamwa. >
< start="88.33" dur="3.39"> -Iwe unoda patsi kumusana kwekutumira mazana mana emhepo? >
< start="91.72" dur="2.76"> Chii chatiri kuita ne400 maililators >
< start="94.48" dur="3.03"> apo isu tinoda 30,000 ventilators. >
< start="97.51" dur="2.64"> -Asi, iwe unoziva, kana iwe uchifunga nezveGavhuna Cuomo, >
< start="100.15" dur="1.88"> tiri kumuvakira zvipatara zvina. >
< start="102.03" dur="2.09"> Tiri kumuvakira nzvimbo ina dzekurapa. >
< start="104.12" dur="3.92"> Tiri kushanda zvakanyanya, zvakaoma zvikuru kune vanhu veNew York. >
< start="108.04" dur="0.98"> Tiri kushanda pamwe naye, >
< start="109.02" dur="2.19"> ndobva ndamutarisa pa show achinyunyuta. >
< start="111.21" dur="2.92"> -Regardless kana VaTrump vachiuya panguva yekutaura kwaCuomo kana kwete, >
< start="114.13" dur="2.4"> izvi zvezuva nezuva nemubati zvave chakafanana >
< start="116.53" dur="2.72"> kweNew Yorkers vachitsvaga kutungamirirwa uye kunyaradza. >
< start="119.25" dur="5.17"> -Tiri kuzogadzira nekuti ndinoda New York, >
< start="124.42" dur="4.58"> uye ndinoda New York nekuti New York inokuda. >